About Us - Changzhou Daming fanafody Equipment Co., Ltd.
Changzhou Daming fanafody Equipment Co., Ltd. naorina tamin'ny 2000, dia matihanina mpanamboatra anjara amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana sy ny fanamboarana ny paharitry fitaovana sy ny milina granulating. Tsy amin'izao fotoana izao ny toeram-piasana amin'ny karazana hafa sy ny fepetra arahana ao China.Changzhou Daming fanafody Equipment Co., Ltd. naorina tamin'ny 2000, dia matihanina mpanamboatra anjara amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana sy ny fanamboarana ny paharitry fitaovana sy ny milina granulating. Tsy amin'izao fotoana izao ny toeram-piasana amin'ny karazana hafa sy ny fepetra arahana any Shina.
Ny orinasa mifoka mandroso ny teknolojia sy ny zavatra niainany tao an-trano sy any ivelany, ary hentitra manatanteraka ny ISO9001 fenitra iraisam-pirenena ny rafitra tsara mba ho azo antoka ny kalitaon'ny vokatra. Ao amin'ny fampandrosoana sy ny fikarohana ny paharitry fitaovana, dia foana fanavaozana sy hanova ny planina sy mpanamboatra andiana nandroso sy ny heriny-mamonjy vokatra. Araka ny zavatra ilain'ny an-tsena, dia efa lasa omby efa-polo andiana paharitry, granulating, fampifangaroana ary de-dusting vokatra. Ny vokatra dia be ampiasaina ao dehumidification-paharitry ny indostria sy ny akora na vokatra ao amin'ny fanafody, simika, sakafo, hazavana orinasa sy ny orinasa hafa, ary nandray tsara ny mpampiasa. Mpanjifa dia tonga soa ny hitondra ny fitsapana sy ny fisafoana.
Ny orinasa no misy eo amin'ny tsara tarehy Jiangnan Sinoa (atsimon'ny Reniranon'i Yangtze) tanàna sy ny tanàna malaza Changzhou indostria. Izany dia miorina ao amin'ny hinterland an'i Shanghai sy Nanjing Economic Development Zone, miaraka amin'ny toe-draharaha mahafinaritra sy mora fitaterana. Ny orinasa dia manana hery matanjaka ara-teknika, ny rafitra fitiliana tonga lafatra, fitaovana be pitsiny sy ny fikarakarana ny rafitra fitantanana hentitra. Isika handray amim-pitiavana ny vao na ny ela mpanjifa, namana avy amin'ny fari-piainana rehetra ao an-trano sy any ivelany mba hitsidika sy miara-miasa mba hamorona hoavy tsaratsara kokoa!